Kaayyoo sabaaf wareegamuun, fedhii sabaaf abboomamuun, of dagatanii sabaaf jiraachuun Kichuu
HomeAfaan OromooNewsKaayyoo sabaaf wareegamuun, fedhii sabaaf abboomamuun, of dagatanii sabaaf jiraachuun
(Bitootessa 30,2019) Kaayyoo sabaaf wareegamuun, fedhii sabaaf abboomamuun, of dagatanii sabaaf jiraachuun lafee isaanii irraa biqile; dhiiga jaallanii irraa madde. Akkasiin irraa baranne; dantaa sabaaf jiraachuu barruu isaan dhiigaan barreessan irraa qoranne.
Akeeka isaanii irraa hin maqnu! Dhugaa sabaa irraa hin baqannu!” jennee hirbuu galle; dhiigaa fi lafee isaanii waamnee nullee kakuu seenne. Asxaa isaan irraa kufan kaafnee bakka isaanii buune. Kanaaf isaan yaaddanna. Labsiin waliif dhaamna. Gootota sabaa jennee leelloodhaan yaadanna. Kuni ulfina yaaddannoo seenaa ti.
Ebli 15 Guyyaa Yaadannoo Gootota Wareegamtoota Oromoo ti! Ilmaan Oromoo baddaa fi gammoojjiitti, magaalaa fi baadiyaatti mirga Oromoo kabajsiisuuf, bilisummaa Oromoo dhugoomsuuf, abbaa biyyummaa Oromoo mirkaneessuuf haala garagaraa keessatti wareega lubbuu gatii qaalii takkittii kafalan bara baraan ni yaadatamu!
Barana Guyyaan Yaadannoo Gootota Wareegamtoota Oromoo Ebli 15 Oromiyaa keessatti ummata bal’aa Oromoo gidduutti kabajama. Guyyaa kana haala nuuf danda’ame hunda keessatti wareegamtoota keenya haa yaadannu!
Warra kaleessa dukkana keessa ofiif boba’anii guca ta’anii daandii dhiigaan saaqan, kanneen haala har’aa kana argamsiisuuf aarsaa olaanaa baasanii darban, walitti qabaatti Gootota wareegamtoota Oromoo kalee hanga har’aa cufa guyyaa isaanii Ebla 15, torban lama booda guutuu Oromiyaa keessatti yaadannee haa oollu jechaa dhaamsa keenya garanumaan dabarsina.
Yaadannoon bara baraa wareegamtoota keenyaaf!